हिमाल खबरपत्रिका | खुला गर्दा नै भलाइ छ
खुला गर्दा नै भलाइ छ
हिमाल (६–१३ असोज) आवरण बहसले प्रतिबन्धित गाँजामाथि साँच्चैको बहस छेडिदिएको छ । उपयोगको कानून बनाएर गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ । बेफाइदाको मात्र चर्चा गरेर फाइदालाई ढाकछोप गर्नु राम्रो होइन । बरु गाँजाको औषधीय गुणलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक लाभ लिनबाट नचुकौं । गाँजालाई खुला गर्नु भनेको अनियन्त्रित सेवन हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन ।
अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुक गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाएर औषधीय उपयोगमा गाँजा खेतीलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले प्रतिबन्धको डण्डा बर्साइरहनुको कुनै तुक छैन । खुला गर्दा नै सबैको भलाइ हुन्छ ।
खड्गबहादुर बुढाथोकी, अनलाइनबाट
स्वाभिमानका कुरा नगरौं
हिमाल (६–१३ असोज) रिपोर्ट बेथिति ‘दाताको प्रभावमा नीति र कानून’ ले स्वाभिमानका कुरा जति गरे पनि हामी आफ्नै नीति र कानून बनाउन विदेशीमाथि निर्भर रहेछौं भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ । कानून र नीति बनाउनमै दाताको सहायता लिने हो भने विदेशी हस्तक्षेप र आत्मनिर्भरताका कुरा गर्दै नगरे हुन्छ ।
शर्मिला आचार्य, अनलाइनबाट
हिमाल (६–१३ असोज) रिपोर्ट वायुसेवा ‘इथियोपियाबाट के सिक्ने ?’ ले धेरै पाठ सिकाएको छ । इथियोपियाको वायुसेवाबाट जस्तै अन्य थुप्रै देशबाट हामीले सिक्ने पाठ धेरै छन् । बरु हामी सिक्न तयार छौं कि छैनौं, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । इथियोपियाको उदाहरणले साँच्चिकै सोचनीय बनायो । हामी सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिन्छौं तर, इथियोपियाकै उदाहरण काफी हुने रहेछ । हाम्रा नीति–निर्माताको घैंटामा घाम कहिले लाग्ने होला ! उदाहरण सहित पस्किएको सकारात्मक रिपोर्टका लागि धन्यवाद ।
अनुशरण राणा, अनलाइनबाट
हिमाल (६–१३ असोज) रिपोर्ट संस्कृति ‘पञ्चैबाजाको लय’ ले हाम्रो पहिचानलाई उजागर गरिदिएको छ । संस्कृति नै हाम्रो पहिचान हो भन्नेमा दुईमत छैन । विश्वमा विभिन्न बाजा भए जस्तै पञ्चैबाजा नेपालीको आफ्नो बाजा हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । यसैमा हामीलाई गर्व पनि छ । चौघेरो नाघेर जसरी महिला दिदीबहिनी यस बाजाको संरक्षणमा लागेका छन्, त्यो सराहनीय छ । राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न पुगेको पञ्चैबाजा यो जाति र ऊ जातिको नभनी आजैबाट संवद्र्धनमा लागौं । पञ्चैबाजा संरक्षणमा लागिपर्ने सबैलाई साधुवाद ।
सरला धमला, अनलाइनबाट
आवश्यक छ यौन शिक्षा
हिमाल (६–१३ असोज) रिपोर्ट यौन शिक्षा ‘अंकुशले जोखिम’ले अभिभावक एवं शिक्षक÷शिक्षिकाले आफ्ना नानीबाबुलाई कसरी शिक्षा दिने र व्यवहार गर्ने भन्ने खुलस्त पारिदिएको छ । यौन शिक्षा दिन संकोच मान्नाले जोखिम निम्तिन्छ भन्ने बुझेर अभिभावकले नै आफ्ना नानीबाबुहरूलाई उचित यौन शिक्षा दिएर उनीहरूका जिज्ञासाको सम्वोधन गर्दै जानु जरुरी छ ।
सब्बु तिवारी, अनलाइनबाट
हिमाल (६–१३ असोज) आवरण रिपोर्ट ‘गाँजामाथिको प्रतिबन्धः खुला गरे के होला !’ ले लागू औषध भनेर गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस शुरु गरेको छ ।
हामीकहाँ रक्सी र चुरोटमा ‘नियमन’को नीति लागू गरिएको छ । लागू औषध प्रतिबन्धित छ, ओसार–पसार र सेवन पनि भइरहेको छ । यौन व्यवसायमा पनि प्रतिबन्ध छ, तर चलिरहेकै छ । प्रहरीले होटलका कोठाबाट विभिन्न जोडीलाई पक्राउ गरेर छाती फुलाए पनि त्यस्तो काम रोकिएको छैन । होलीका बेला लोलामा प्रतिबन्ध लाग्छ, तिहार आयो भने पटाकामा प्रतिबन्ध लाग्छ । प्रतिबन्ध लगाउन सजिलो भए पनि हामी कति सफल भएका छौं र प्रतिबन्ध आवश्यक छ÷छैन लेखाजोखा गरिनुपर्छ । यसर्थ आवश्यकता, आधुनिकता, नागरिकका आकांक्षा, वैश्विक परिस्थिति, प्रतिबन्धित गरिंदाको अवस्था आदि विश्लेषण गरेर मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने, नियमन गर्ने वा खुला गर्ने निर्णय गरिनुपर्छ । ५० वर्षअघि सम्म गाँजाबाट हाम्रै मुलुकमा विभिन्न औषधिहरू बन्थे, प्रतिबन्ध लगाइएपछि ती औषधि बनाउने कतिपय सूत्रहरू समेत हराए होलान् । हाम्रो पुख्र्यौली ज्ञान र सीप दरबार स्क्वायर वरपरको कलामा सीमित राख्नुपर्ने त होइन होला !
५० वर्षअघि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई दबाब दिने विकसित मुुलुकहरूले अहिले यसलाई क्रमशः खुला गर्दैछन् । पछिल्लो उदाहरण क्यानडा नै हो । त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले गाँजालाई खुला गरिएपछि त्यसबाट किशोरकिशोरीलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता लिएका अभिभावकहरूलाई भनेका छन्, “तोकिएका विक्रेताले परिचयपत्र हेरेर मात्र बिक्री गर्दा गाँजामाथि किशोरकिशोरीको सहज पहुँच हुनेछैन । बरु पहिलेजस्तो लुकेर जो पायो उसैलाई लागू पदार्थ बिक्री गर्ने सडकका विक्रेताहरूबाट पनि बालबालिका जोगिनेछन् ।”
अबको हाम्रो बहस गाँजाका बहुपयोगी गुण, यसको शास्त्रीय र सांस्कृतिक सम्बन्ध साथै गाँजाबाट लिन सकिने आर्थिक लाभबारे केन्द्रित हुनुपर्छ । मिडियामा दिनहुँजसो आइरहने ‘गाँजा बरामद’ शीर्षकका समाचारले पनि यसको कारोबार अहिले फुक्काफाल भइरहेको भन्न सकिन्छ । बरु कारोबार खुला गरिएपछि तस्करीको समस्या रहनेछैन ।
राजीव काफ्ले, इमेलबाट